Ahoana ny fomba fanaovana logo | Famoronana an-tserasera
Te hahafantatra ny fomba fanaovana sary famantarana amin'ny fivarotana an-tserasera ve ianao? Angamba ho an'ny bilaoginao? Efa nangatahana tetik'asa tokony hanoloranao sary famantarana ve ianao ary mbola tsy nanao an'io? Mety hieritreritra ianao fa ny fanaovana sary famantarana no zavatra mora indrindra eran'izao tontolo izao, ary ao anatin'ny dimy minitra dia azonao atao izany. Fa raha ny tena izy dia misy siansa lehibe ao ambadik'io "sary kely" io ary, minoa azy na tsia, ny fanehoana sary famantarana kalitao izay misy akony ary tadidinao fa tsy mora ny manatratra azy.
Noho izany, tsy hampianatra anao eto fotsiny izahay ny fomba fanaovana sary famantarana, fa hiresaka ny zavatra rehetra tsy maintsy harahinao izahay rehefa mamorona azy io ka ny endrinao no tsara indrindra amin'ny rehetra.
1 Inona no famantarana
2 Maninona no manan-danja tokoa ny sary famantarana?
3 Inona avy ireo toetra tokony hananan'ny sary famantarana?
4 Ahoana ny fomba fanaovana sary famantarana
4.1 Miaraka amin'ny programa
4.2 Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny Internet
4.3 Azo atao amin'ny fampiharana ve izy ireo?
Inona no famantarana
Ny teny hoe logo dia ampahany amin'ny voambolantsika ankehitriny, indrindra raha miasa amin'ny famolavolana tranonkala ianao, na tafiditra amin'ny asa sasany mifandraika amin'ny marketing, doka ...
Araka ny RAE (Royal Spanish Academy), ny sary famantarana iray, antsoina koa hoe sary famantarana, dia sary an-tsary mampiavaka ny orinasa iray, fahatsiarovana, marika na vokatra iray. Ary koa vondron-taratasy, fanafohezana, tarehimarika sns. natsofoka tao anaty sakana iray mba hanamorana ny fandrafetana endrika.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia miresaka a sary solontenan'ny marika, orinasa, vokatra sns. izay mamela hamantatra izany zavatra na orinasa izany amin'ny zavatra ataony na ny anarana. Ohatra, rehefa mieritreritra an'i Coca-Cola, Nesquik, Nutella, McDonald's isika ... marika sy orinasa izy ireo ary tonga ao an-tsaintsika ireo logo, izay no ahalalantsika azy ireo.
Mba hahatratrarana izany, ny orinasa sy ny hevitra tianao hamboarina miaraka amin'ny sary famantarana dia tsy maintsy dinihina tsara. Izy ireo dia mety ho fanafohezana, zavatra misolo tena, anarana feno ... Ny tadiavina amin'izany dia ny famoronana fitokisana ary miaraka amin'izay ny fanekena, izany hoe ilay olona mahita io logo io dia mampifandray izany amin'ny orinasa, vokatra na marika ananany, amin'ny fomba tsy mitovy amin'ny fifaninanana.
Misy karazana logo maromaro, avy amin'ny logo, izay be mpahalala indrindra (izay ampiasan'izy ireo amin'ny ankapobeny ny litera), hatramin'ny sary an-tsary (miaraka amin'ny sary na mifangaro sary sy litera), isotype (fanehoana sary) na isologo (sary sy soratra mifangaro miaraka)).
Maninona no manan-danja tokoa ny sary famantarana?
Raha manontany tena ianao hoe maninona ianao no tsy tokony hanokana fotoana, ezaka ary loharano amin'ny sary kely, dia manontany anao izahay:
Inona no holazainao aminay raha mahita sary famantarana miaraka amina taratasy ianao, toy ny hoe nanao izany tamin'ny Paint izy ireo nefa tsy nandinika ny antsipirihany? Azo inoana fa hoheverinao fa tsy matotra ilay orinasa ary tsy miraharaha ny antsipiriany izy. Hatoky azy ireo ve ianao? Ohatra, mpisolovava iray, izay manana fango tsy dia tsara natao tamin'ny anarany voalohany. Toa zazalahy kely no nanao an'io, handray ny serivisiny hisolo tena anao any amin'ny fitsarana ve ianao? Azo inoana fa tsia, satria raha manao izany amin'ny sary famantarana ianao, ahoana no "avela" amin'ny asanao?
Eny, izany no mitranga amin'ny lanjan'ilay sary famantarana. Ireo dia manompo an'i manomeza fahatsapana zavatra vita tsara, izay dinihinao amin'ny antsipiriany ary miezaka ianao manome azy ny votoatin'ny orinasa, marika na vokatra.
Inona avy ireo toetra tokony hananan'ny sary famantarana?
Ankehitriny rehefa fantatrao bebe kokoa ny momba ny logo ary fantatrao ihany koa ny maha-zava-dehibe azy ireo, alohan'ny hidirantsika amin'ny fampianarana anao ny fanaovana logo, dia tokony hojerenao izay toetra tokony hihaonan'izy ireo. Manokana:
Miezaha ho tsotra. Tsy mila zavatra manahirana ianao, tsotra fotsiny mba ho mora tadidy. Amin'io lafiny io, ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny tsy hampiasa loko mihoatra ny 3, hisafidy typeface tsara ary hisorohana ny aloka na gradients.
Izany dia mandeha araka izay tianao aseho. Izany hoe mahita ny olona ary mampifandray izany amin'ny orinasa sy ny zavatra amidiny. Na raha vokatra izy io, miaraka amin'ny tanjon'io.
Aza manam-potoana. Na dia afaka miova aza ny logo rehefa mandeha ny fotoana, dia mila iray izay tsy mila ovaina matetika loatra mba "ho fironana."
Ary tonga amin'ny ampahany azo ampiharina indrindra izahay, ny fomba fanaovana sary famantarana. Androany dia manana safidy maro ianao hanao izany. Saingy alohan'ny hanombohanao dia mora ny fahafantaranao tsara ny orinasa, ny vokatra na ny marika, ny fahalalanao ny zavatra tiany aseho amin'ny sary famantarana sy ny zavatra tiany hahatratrarana azy. Amin'izay ianao dia afaka mahazo ny sarisary voalohany ary, noho izany, tsy mila miasa mafy aminy.
Lafiny momba ny fomban'ny sary famantarana, loko, endrika, mpihaino kendrena, sns. dia teboka tena ilaina alohan'ny handehanana miasa. Raha efa anananao ireo dia andao hiroso amin'ny 'sary'.
Miaraka amin'ny programa
Ny programa fanovana sary no ho tsara indrindra hanatanterahana an'io asa io. Ary sady efa nandoa no maimaim-poana. Tsy misy isalasalana Photoshop dia programa tsara, saingy misy maro hafa izay afaka manampy anao hanao sary.
Mazava ho azy fa mamporisika anao ny programa izay nofidinao dia mamela anao hiasa miaraka amina sosona. Fa maninona Eny, satria hanamora ny zavatra anao izany satria, amin'izany fomba izany, ny sosona tsirairay dia hikarakara ampahany amin'ny sary famantarana (ny afara, ny sary, ny soratra, sns.) Ary, noho izany, raha misy zavatra tokony hovaina, ianao dia tsy mila mamerina azy amin'ny laoniny, fa manova ny ampahany aminy fotsiny.
ara-dalàna, ny dingana manaraka dia izao manaraka izao:
Mamorona sary banga (na mangarahara) miaraka amin'ny fandrefesana ny logo.
Sokafy ny sary ampiasaina amin'ny programa (raha ampiasaina ny iray).
Soraty ny lahatsoratra ary ovao ny typografika miorina amin'ny fototr'ilay orinasa sy izay tianao atolotra ny mpanjifa. Tsarovy fa tsy tsara ny manana aloka na gradients.
Ahoana ny fomba fanaovana logo amin'ny Internet
Ny fomba iray hafa ahafahana manao sary famantarana dia ny fampiasana Internet. Ary manokana ireo pejy an-tserasera avelan'ny mpampanonta anao hamoronana ny logo tianao amin'ny modely nomeny.
Misy ny karama, tsy hampiasana azy ireo, fa ny fampidinana ny sary famantarana. Malalaka ny hafa ary amin'ity tranga ity dia manana ireo izay tena fototra ianao ary ny hafa kosa mamela anao hamorona endrika kalitao antonony.
fa Raha logo iray matihanina toa tsara no tadiavinao dia ny fanaovana azy miaraka amin'ireo programa no tsara indrindra.
Azo atao amin'ny fampiharana ve izy ireo?
Ny fiakaran'ny finday avo lenta dia nahatonga anay hampiasa bebe kokoa ny finday amin'ny zava-drehetra. Anisan'izany ny manitsy sary na, toy ny amin'ity tranga ity, hianaranao ny fomba fanaovana sary famantarana. Satria eny, azo atao izany.
Fampiharana toa Zyro Logo Maker, Logo Maker na Logaster dia sasany amin'ireo izay hitanao maimaim-poana. Ary raha mitady olona matihanina kokoa ianao dia misy ihany koa ny sarany.
Ny olana amin'ireo dia "voafetra" izy ireo raha ny sary, ny karazana endritsoratra sns. (noho izany dia atolotray indray ireo programa).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fanaovana sary famantarana